Charles Perrault: Biography na akụkọ ụmụaka kacha mma | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Charles Perrault bụ onye edemede nke bụbu akụkụ nke nwata anyị, nke akụkọ ihe mere eme, nke akụkọ gbasara ụwa niile. Ya bụ ụfọdụ n'ime akụkọ ndị ama ama na akụkọ ụmụaka, ọ bụ ezie na eziokwu nke onye ode akwụkwọ French a na-agbasakarị karịa eze na "ezigbo ụwa" karịa echiche efu. Ndụ na ọrụ nke Charles Perrault Ọ bụghị naanị na akụkọ ihe mere eme na-atọ ụtọ, kamakwa mgbe a bịara n'ịghọta anwansi nke gbanwere ike ịkọ akụkọ ruo mgbe ebighi ebi.
1 Charles Perrault: onye na-akọ akụkọ na Courtlọ ikpe
2 Charles Perrault: Akụkọ Nkụzi Ya kacha mma
2.1 Durmiente mara mma
2.2 Obere Ukwuu Red Red
2.3 Agba agba Blue
2.4 Pusi nwere akpụkpọ ụkwụ
Charles Perrault: onye na-akọ akụkọ na Courtlọ ikpe
Charles Perrault mụrụ na Jenụwarị 12, 1628 na Paris, n'obi nke otu ezinụlọ bourgeois nke nna ya bụ ọkàiwu na nzuko omeiwu, nke mere ka ọ nwee ohere ịnweta ihe ùgwù. A mụrụ Perrault n'oge ọmụmụ nwa abụọ nke ejima ya, François, nwụrụ ọnwa isii ka ọ bịasịrị n'ụwa.
Na 1637 ọ banyere College of Beauvais, ebe o gosipụtara nnukwu nkà na asụsụ ndị nwụrụ anwụ. N’afọ 1643 malitere ịmụ iwu iji soro usoro nna ya na nwanne ya nwoke, Pierre, onye na-achịkọta ndị isi na onye nchebe kachasị ya. Ma ọ bụ na site na nwata, Perrault gosipụtara ikike dị ukwuu maka ọmụmụ ihe, nke a bụ isi ihe kachasị mkpa maka ndụ ya niile.
Na 1951, ọ gụsịrị akwụkwọ na Bar Bar Association na afọ atọ ka nke ahụ gasịrị, ọ ghọrọ onye ọrụ gọọmentị na sistemụ gọọmentị. N'etiti onyinye mbụ ya, onye edemede ahụ sonyere na okike nke Academy of Sciences na Academy of Arts. Agbanyeghị, n'agbanyeghị ọnọdụ ya na ngalaba ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana mmekọrịta ya na nka, Perrault emegideghị sistemụ ahụ ma ọ bụ nye ihe ịrịba ama ọ bụla nke echiche efu nke akụkọ ya ga-akpalite ọtụtụ afọ mgbe nke a gasịrị. Ndụ ya ejedebe n'ịrụzu ọrụ ya na ịkwanyere Eze Louis nke Iri na Anọ ugwu n'ụdị uri na mkparịta ụka, nke mere ka ọ nwee mmasị n'ebe ndị dị elu na ọnọdụ onye odeakwụkwọ nke French Academy na 1663 n'okpuru okpu nke onye nchekwa ya kachasị ukwuu, Colbert, onye ndụmọdụ nye Louis nke Iri na Anọ.
Na 1665, ọ ga - abụ otu n’ime ndị isi eze. Na 1671 a họpụtara ya Chancellor nke Academy wee lụọ Marie Guichon, onye ọ mụrụ nwa nwanyị mbụ na 1673. N'otu afọ ahụ ka a họpụtara ya onye Librarian nke Academy. Ọ mụrụ ụmụ atọ ọzọ, nwunye ya nwụnahụrụ mgbe ọ mụsịrị nke ikpeazụ, na 1678. Afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, Perrault ga-enyefe ọnọdụ nwa nwoke Colbert, oge nke ga-egosi mgbanwe ya na otu akụkụ nke onye edemede ụmụaka nke aha ya bụ isi. bụ Akụkọ ifo n’oge gara aga, nke amara nke ọma dịka Akụkọ gbasara mama m. N’agbanyeghi ide akụkọ a niile n’afọ 1683, a gaghị ebipụta ha ruo n’afọ 1697.
N'ime afọ ndị ikpeazụ nke ndụ ya, Perrault raara onwe ya nye ide ihe ọjọọ nye eze, eze Sweden, Spain na, karịsịa, Louis nke Iri na Anọ. Ọ raara uri ahụ nye ya El Narị afọ nke Louis Onye Ukwu, bụ́ nke kpatara oké ọgba aghara ka e bipụtachara ya na 1687.
Charles Perrault nwụrụ na Mee 16, 1703 na Paris.
Charles Perrault: Akụkọ Nkụzi Ya kacha mma
Ọ bụ ezie na akụkụ nke ọrụ edemede ya (gụnyere akwụkwọ 46 ọ bipụtara mgbe ọ nwụsịrị) kwuru banyere ndị eze, Courtlọikpe na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, Akụkọ ụmụaka Perrault ha gụnyere ụkpụrụ omume ọma nke onye dere ya lere anya dị ka ihe dị mkpa n'oge ndị tara akpụ dị ka nke France na narị afọ nke XNUMX.
Ogres, fairies, boated nwamba na adaeze malitere ịdọrọ ya n'isi sitere n'ike mmụọ nsọ nke akụkọ na-ekesa n'etiti ndị klas dị ka ihe nketa nke oratory si mba Europe ndị ọzọ na ụfọdụ ndị ọzọ osisi. N'aka nke ya, ezigbo ntọala nke onye dere ya na-eleta, dị ka nnukwu ụlọ nke Ussé, na ngalaba Indre na Loire, ga-akpali akụkọ ndị dị ka Mma Ihi ụra.
Akpọrọ akwụkwọ chịkọtara akụkụ nke akụkọ ndị a Histoires ou contes du temps passé, avec des omume na aha nke Contes de ma mère l'Oye na mkpuchi azụ. Olu ya nwere akụkọ asatọ, nke Charles Charles Perrault kacha mara amara:
Durmiente mara mma
Akụkọ a ma ama banyere Princess Aurora, nke a mara ikpe ụra ruo mgbe ebighi ebi mgbe ejiri ya na spindle, jiri ya ghọọ otu n'ime akụkọ kachasị agafe agafe na akụkọ ntolite Perrault sere na ụra adaeze akụkọ ifo Ya mere, ịlaghachi na akụkọ ochie Icelandic ma ọ bụ Spanish ma gbakwunye mmetụ na nghọta.
Obere Ukwuu Red Red
Akụkọ banyere nwatakịrị nwanyị yi uwe uhie na-acha uhie uhie nke gbabara n'ime anụ ọhịa wolf n'ụzọ ụlọ nne nne ya sitere a akụkọ mgbe ochie iji gosi ọdịiche dị n'etiti obodo na oke ohia. Perrault kpochapụrụ nkọwa ndị kachasị njọ (dị ka ọkpụkpọ wolf na Little Red Riding Hood iji rie ozu nne nne ya) ma ruo eru ụkpụrụ omume na-eduzi ụmụ agbọghọ niile mgbe ọ na-egbochi ha izute ndị bịara abịa.
Agba agba Blue
Ihe ndekọ akụkọ akụkọ Perrault kacha bụrụ akụkọ na-ezo aka na nwanyị nke chọtara ozu ndị nwunye di ọhụrụ ya na nnukwu ụlọ. Agbanyeghi na akuko banyere ulo oma na di di omimi sitere na akuko ndi Greek, ekwenyere na Perrault sitere na onu ogugu dika onye na-egbu egbu Gilles de Rais, onye bishọp nke Breton nke narị afọ nke XNUMX.
Pusi nwere akpụkpọ ụkwụ
Nwamba nke nwa onye na-egwu mmiri nke nyere ihe nketa ya niile mgbe ọ nwụsịrị ghọrọ atụmatụ nke akụkọ a na-atọ ọchị nke nkọwa ya na-eweta ihe karịrị otu arụmụka. Fọdụ na-adabere na nkwupụta ahụ bụ na pusi mmụọ nke na-azụ ahịa ahụ bụ ihe mmụta na nchịkwa azụmahịa, ebe ndị ọzọ na-arụtụ aka na anụ ọhịa mara mma dị ka ihe atụ maka mmetụ anụmanụ nke mmadụ.
Akụkọ ole na ole agafeela n'oge ka nke Cinderella, nwa agbọghọ na-eje ozi nne di ya na ụmụ nwanyị nwanyị abụọ na-achọsi ike ịlụ onye isi. Akụkọ a gosipụtara echiche kacha ochie n'ụwa: ọgụ nke ọma na ihe ọjọọ, isiokwu dịlarị na otu n'ime nsụgharị mbụ nke akụkọ sitere na Ancient Egypt.
Thumbelina bụ ọdụdụ nwa n’ime ụmụaka asatọ. Nnukwu uru nke mere ka o zoo onwe ya na akpụkpọ ụkwụ nke ogre chọrọ iri ha niile. Ihe ichoro na oke n ’a amaghi uru mmadu bara.
Akụkọ abụọ ọzọ dị n’ime akwụkwọ ahụ bụ The fairies na Riquet na pompadour, na-amachaghị. N’aka nke ya, agụnyere nsụgharị nke Akụkọ banyere Mama Goose Akpụkpọ anụ ahụ, akwụkwọ akụkọ Perrault ọzọ nke katọrọ idina mmadụ site n'ịkọ akụkọ banyere eze chọrọ ịlụ nwa ya nwanyị.
Kedu ihe bụ ọkacha mmasị gị Charles Perrault akụkọ?
You ma ihe ndị a Akụkọ 7 na-agụ na oge nke ụzọ ụgbọ oloko?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Charles Perrault: biography na akụkọ kacha mma gbasara ụmụaka
Know maara mbipụta nke ụlọ mbipụta Edhasa, ọ dị ebube na nchịkọta nke akwụkwọ TREASURE, ihe ịtụnanya
Akụkọ mara mma, enwere m obi ụtọ na ya. Echere m banyere, Ihi ụra Mma bụ ọkacha mmasị m. Lelee akwụkwọ a nke ọma, enwere ụfọdụ ụdị ndị ọzọ (1951 / suss). Amalitere m isoro gị, blog gị dị mma.
Daniela dị ndụ dijo
Zaghachi Daniela carmenn
Ndewo, nwute ma enwere ụbọchị ị mejọrọ "Na 1951 ọ gụsịrị akwụkwọ na Association Bar"
Onye edemede magburu onwe ya, ọ bụ akụ na-enwe ike ịnụ ụtọ ọrụ nke titan dị otu a, yana ozi ya na-agbanwe maka ọnọdụ nke oge a bụ ihe mgbaàmà na ọ nwere ọhụụ dị mma. Ọ bụ ezie na ọtụtụ akụkụ nke akụkọ ha na-efunahụ akụkụ nke ọdịnaya ha na mmegharị ihe nkiri, ha ka dị arọ.
ndewo, kedu ka m ga-esi kwuo peeji a, biko, ahụghị m ụbọchị emere ya….